Karan Iyo Kajol, SRK Iyo Salman Khan Iyo Xidigaha Dib U Heshiiyay Ee Mudada Dheer Saaxiibada Ahaa (+Sawiro) | Filimside –
Karan Iyo Kajol, SRK Iyo Salman Khan Iyo Xidigaha Dib U Heshiiyay Ee Mudada Dheer Saaxiibada Ahaa (+Sawiro)
Isbuucan Bollywoodka waa isbuuc aad iyo aad ugu wanaagsan oo aysan marnaba ilaawi doonin, maadama abaar badan oo ay heesay dib oga bixi doonan ayago helay filimkii ka farxiyay kaaso ah Toilet: Ek Prem Katha.
balse farxada hada ay kudhex jiraan waxaa kasii horeysay farxad kale taaso ah saaxiibadii mudada dheer saaxiibada soo ahaa kuwaaso mudo gaaban kala foogaday dib isugu soo laabtay waa Karan Johar Iyo Kajol Devgan.
khliaafkii dhexmaray Karan Iyo Kajol wey soo afjareyn kadib markii lashegay in Karan kawacay Mobileka Kajol uguna hambalyeyay xaflada dhalashadeeda sido kalena Kajol ay ku casuumtay xafladeeda.
waxaana goobtaas ka dhacay isasoo dhaweyn iyo hab isasiin saaxiibo mudo dheer kala aamusnaa soona afjaray dagaalkii ka dhaxeeyay.
hadaba sidaa si lamid ah waxaa hada kahor khilaaf dhexmaray xidigo waaweyn oo maanta Bollywoodka maqaam sare ka joogaan caana ka ah.
SRK iyo Salman Khan:
Sidaan wada ognahau SRK iyo Salman Khan waxay kamid ahaayen xidigaha saaxiibada ah ee ugu waaweyna 90kii ayagoo aad iyo aad isugu dhowaa waqtiya fara badana isla qaadan jiray.
balse xaal wuxuu is bedelay markii la gaaray qarnigaan cusub qaasatan intii lagu guda jiray duubista filimka Chalte Chalte oo xiligaas ay wada duubayen SRK iyo Aishwarya Rai Bachchan.
waxaa lashegay in goobta lagu duubayey uu yimid Sallu oo caabsan sido kalen rabsho ka abuuray goobta asigoo qasay waana xiligii asiga iyo Aishwarya xiriirka kadhaxeeyay.
hadaba arinkaas SRK aad ayuu oga xumaaday sido kale waxay markale si toos ah isugu dhaceyn xafladii dhalasho ee Katrina Kaif Dhigatay labadan jilaana ay kasoo qeyb galeen.
balse waxaaas oo khilaaf ah waxay soo afjareyn sanadkii 2013 kadib markee u heshiyeen si caan aheyd oo dad badani goob joog ahaayen ayagoo dadka hortooda hab isku siiyen soona af jareyn khilaafkii weynaa.
waxayna hada yihiin kuwa aad iyo aad isugu dhow oo heer waxay marayaaan hadiyado qaali ah inee isasiiyan sido kalena aflaamtooda qofba qofka kale uu muuqaalo marti ah ku lahaado.
Aishwarya Rai Bachchan Iyo Rani Mukherji:
labadaan atariisho ee saaxiibada isku dhow ahaan jiray waxay kala guureyn oo ay isku dagaalen ama colaadooda ka bilaawatay kadib markii uu Sallu Aish ka kaxeeyay asigoo cabsan duubista Filimka Chalte Chalte maadama uu halkaas buuq ka dhaliyay.
hadaba SRK oo arinkaa aad og xumaaday ayaa Aishwarya gabi ahaanba ka saaray mashruucas kuna bedelay Rani Mukherji.
halkaas ayuun ka bilawday xurgugtii iyo colaadi labadan atariisho dhexmartay balse markuu Aish aabahed geeriyooday xidigii kasoo qeyb galay tacsidaas waxaa kamid aheyd Rani Mukherji halkaas ayuuna kudhamaaday dagaalkii qabooba ee dhexmaray xidigahan.
SRK iyo Farah Khan:
waxay isla soo shaqeyn mudo dheer SRK iyo Farah khan waana kuwa kamid ah saaxiibada Bollywoodka ugu waaweyn waxayna wada sameyeen aflaam Classic ah oo ay kamid yihiin Happy New Year, Om Shanti Om, Main Hona Na iyo kuwa kale.
saaxiibadan is jecel wada shqeynta wacana ka dhaxeysa waxaa soo dhexmaray khilaaf yar kadib markuu SRK dharbaaxay Farah khan ninkeeda oo lagu magacaabo Shirish kunder, SRK aad buu u fududaaday xiligaas.
balse arinka waa soo idlaaday hadana xidigahan waa kuwa aad iyo aad isku qadariya saaxiibo isku dhowna ah, waxaana macquul ah mashaariic Classica ah inee markale wada sameyaan.
Karan Johar Iyo Kareena Kapoor Khan:
Filimsameye Karan Johar wuxuu filimkiisa labaad ee uu Director ka noqdo door weyn ka siiyay Kareena Kapoor Khan kaaso ah Kabhi Khushi Kabhie Gham.
hadaba Karan markale ayuu damcay inuu Kal Ho Na Ho atariisho koowaad kaga dhigo Kareena balse Kareena ayaa dalbataya Lacag waali ah oo ay kusameyneeso filimkaan taasi oo uu Karan awoodi wayey sidaa awgedna uu bedelkeeda Preity Zinta atariisho koowaad kaga dhigtay filimkas.
balse xurguftaas yar meesha ma taalo waana shaqsiyaad saaxiibo ah nolosha caadiga ah iyo tan shaqadaba.
Waxaa Aqriyay: 2,200